Umaki: thola i-b2b ihola ku-inthanethi | Martech Zone
Umaki: thola i-b2b ihola ku-inthanethi
NgoLwesibili, ngoJulayi 22, i-2014 NgoLwesibili, ngoJulayi 22, i-2014 Douglas Karr
Uma ufuna ukuxhumana kwebhizinisi kumanethiwekhi omphakathi, iGoogle iyithuluzi elihle. Ngivame ukusesha igama le-Twitter +, noma igama le-LinkedIn + ukuthola iphrofayli. I-LinkedIn, kunjalo, inenjini enkulu yokusesha yangaphakathi (ikakhulukazi inguqulo ekhokhelwayo) futhi kukhona nezindawo ezifana ne-Data.com ukuthola ukuxhumana. Kaningi kunalokho, ngisebenzisa iGoogle noma kunjalo. Kumahhala futhi kunembile! I-RecruitEm yakhelwe ikakhulukazi abaqashi ukuba